Taasu waa ii post ugu horeeya on the category Online Business - Jasa Pembuatan Website Murah Dan Berkualitas
Home » »Unlabelled » Taasu waa ii post ugu horeeya on the category Online Business
Taasu waa ii post ugu horeeya on the category Online Business
Taasu waa ii post ugu horeeya on the category Online Business, iyo aan haatan wada hadli doonaa kor ku xusan waxaa la magac post uu yahay Pulau Pari "Sida loo Make Money on Internetka fudayd" iyada oo aan waayi doono haddii aad ka raadsato, inkasta oo aad ku e-mail galabtii cusub ayaa shalay ka dhigi kara, hubi in aad awoodid ayaan ahay lacagi dheeraad ah ka weyn barnaamijka affiliate marketing E-SEO badan.
Sida loo Make Money from Internet fudud
Waxaad u baahan tahay inaad ogaato aan leeyahay Information Product a on SEO (virus Search Engine) waa "E-SEO For Darajooyinka # 1 ee Google" for $ 200,000, halkan waxa aad ku arki kartaa.
Warka wanaagsani waa in aad kor u qaadi kartaa products my warbaahinta kala duwan ee internet-ka, waxa uu noqon Facebook, Twitter, Google+ ama on your site gaarka ah. markaa waxaad heli doontaa guddi ah oo 25% for Member Free ah iyo Premium Member 50% for sale kasta oo dhacdaa iyada oo loo marayo link / URL ay u site aad affiliate.
Sidaas asal ahaan oo kaliya in aad kor u qaadaan alaabta aan isticmaalo E-SEO Link / URL of site aad affiliate, iyo waxa shaqaysanayso kartaa haddii aad u suurtagashay in ay la iibiyo qof kale. Joko Warino Sababtoo ah mabda'a waa ka sii dadaashaan inaad kor u qaadaan doonaa dakhliga weyn oo aad ka heli yanng.
Ka dib markii Siyaabaha iyo Monetizing E-SEO Affiliate
1. Liiska First halkan.
sida loo sameeyo lacag on internetka
2. Fadlan buuxi macluumaadka iyo ka dibna riix "FARRIINTA" iyo furtaa email si aan u xaqiijino Ballansigaaga hore.
3. Waxaad heli doontaa email cusub oo ka kooban URLs website-ka iyo aqoonsigooda Afifliate, tusaalooyin ah sida: http://e-seo.rudinazar.com/?reg=namaanda.
4. Isticmaal URL ee goobta si loogu gudbiyo qof kale, waxa kale oo aad isticmaali kartaa calammo la heli karo ee Area Member E-SEO in la rakibayaa on Blog ama website bixiyaha adeegga ad.
sida lacag si ay u helaan internet-ka soo
Maxaa mushaharkaagu Income
For Free Members kaliya si aad u hesho shan iibka maalintii, oo aad soo saari kartaa 50,000 x 5 x 30 maalmood = Rp.7.500.000, - (todoba milyan iyo shan boqol oo kun oo doolar) bishiiba.
Iyadoo Premium Member si aad u hesho shan iibka maalintii, oo aad soo saari kartaa 100,000 x 5 x 30 maalmood = Rp.15.000.000, - (shan iyo toban milyan oo doolar) bishiiba.
WOW ... pengahasilan oo aad u ballaaran oo dheeraad ah ma aha? iyo sidoo kale ay fududahay in la sameeyo :).
E-SEO Affiliate Program waa barnaamij lagu waa mid aad u fudud, oo macquul ah, xalaal ahayn, fudud, madadaalo iyo faa'iido leh. Haddii aad heshay iibka, noo guddiga waxaa lagu bixin doonaa bil kasta laga bilaabo on December 01, ama haddii aad rabto in Pulau Pari aad isla markiiba heli guddi, fadlan halkan igala soo xidhiidh, oo aan kuu soo diri doonnaa guddi toos ah.
Diposting oleh Juragan Channel di 21.51